ADY AMIN’NY HERISETRA AO AN-TOKANTRANO : Tanora 15 nahazo fiofanana
Anisan’ny raharaha saro-bahana nefa mahazo vahana tato ho ato ny herisetra an-tokantrano ao Toamasina. 6 septembre 2019
Ho an’ny taona 2018 fotsiny ohatra dia nahatratra hatramin’ny 230 be izao ny olona niharan’ny hetraketraka tany an-tokatrano tonga teny anivon’ny ivon-toerana fihenoana sy fanoroan-kevitra, araka ny lalàna "centre d’écoute et juridique".
Ny 170 tamin’ ireo dia lehilahy avokoa ary tao Toamasina renivohitra. Na izany aza dia tsy vitsy ireo renim-pianakavina misendra olana vokatry ny hetraketraka ara-batana ataom-bady ary mitondra takaitra sy ratra mihitsy aza. Misy tonga eny anivon’ny fitsarana izy ireny nefa dia mbola misy ihany tsy mahita rariny eo anivon’ny fitsarana noho ny herin’ny vola avy amin’ny andaniny. Vokany, tanora miisa 15 mianandahy mpianatra lalàna no nampiofanina nandritra ny telo andro tao amin’ny efitrano fivoarian’ny lapan’ny tanàna. Fiofanana fanamafisana traikefa " renforcement de capacité juriste et para-juriste".
Hisahana ireo ivon-toerana handray an’ izay tokaNtrano na mpivady ary ny ankizy Iharan’ny herisetra. Nohamafisin’ny mpitsara, Via Céline Yollande, izay manam-pahaizana avy amin’ny FPFE ( Fédération pour le Promotion Féminine et Enfantine) fa tsy mitsara ny raharaha hetraketraka ny ivon-toerAna fa mandamina sy mampihavana ny tokantrano isehoan’ny olana ary manome toromarika momba izany fa raha misy kosa ny faharatràna eo amin’ny andaniny ka tsy misy ny fifandeferana dia manampy amin’ny fikarakarana ny niharam-boina amin’ny fakana taratasy manamarina ny fahavoazany sy manampy azy amin’ny fitarainana ataony ny ivon-toerana.
Misy ny fandraisana an-tanana ataon’ny ivon-toerana an’ ireo izay iharan’ny herisetra karakarain’ny Fpfe Toamasina, Foulpointe, Brickaville, Vatomandry.
Nohamafisin’ny tompon’ andraikitra hatrany fa efa misy fiaraha-miasa amin’ny sampandraharaham-panjakana maro ao Toamasina Fpfe ary miara-miasa ihany koa amin’ny mpamatsy vola madinika mba hanamora ny fandraisana an-tanana. Tanjona ny mba hisian’ny fianakaviana sy tokantrano milamina.